आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा १२५%ले बृद्धि - Business Awaj
Home Insurance आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा १२५%ले बृद्धि
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा १२५%ले बृद्धि
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को दोश्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस त्रैमासमा १५ करोड २ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवदीमा ६ करोड ६५ लाख कमाएको थियो । तुलनाको अवधिमा खुद नाफा १२५.६६ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले ३६ करोड ३९लाख वीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा ३० करोड ६२ लाख खुद वीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले पुनर्वीमा कमिशन बापत ८ करोड ९६ लाख आर्जन गरेको छ भने लगानी, कर्जा तथा अन्य आयबाट ३ करोड ५४ लाख अर्जन गरेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ७ लाख खुद दावी भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी अभिकर्ता कमिशन बापत १ करोड ४८ लाख र व्यवस्थापन खर्च बापत ७ करोड ५३ लाख खर्च गरेको छ । त्यसैगरी भुक्तानी हुन बाँकी दावी रकम ६१ करोड ११ लाख रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ८ करोड रहेको छ भने जगेडा कोषमा २८ करोड ८७ लाख रहेको छ । कम्पनीको बीमा कोषमा ४३ करोड ५३ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी २७.७८ रहेको छ भने नेटवर्थ १६६.९४ रहेको छ । त्यसैगरी मुल्य आम्दानी अनुपात ३०.२३ गुणा रहेको छ ।
Previous articleप्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको खुद नाफा २४%ले बढ्यो – प्रति सेयर आम्दानी कति?
Next articleनेप्सेमा एक बैंकको ८८ लाख कित्ता बोनस सेयर सुचिकृत
शिखर इन्स्योरेन्सको साधारणसभा आह्वान, बोनस सेयर पछि ३० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले पायो आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले गर्यो बोनस सेयर घोषणा
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर प्रस्ताव
एशियन लाइफद्धारा नयाँ बोनसदर सार्वजनिक, अधिकतम ८७ रुपैयाँसम्म पाउने
कुमारी इक्वीटी फण्डको इकाइका लागि आबेदन खुल्ला
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले फागुन २३ गते देखि सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्काशन गर्ने
सूचना विभाग दर्ता नं.: २१००/०७७-७८
Khush Bahadur Ghole
Address: Kathamndu-07, Chabahill
BusinessAwaj.com provides everything about current Business news & financial updates